Ter Stegen oo rikoodh cajiib ah ka sameeyay kulankii xalay dhex maray kooxaha Barcelona iyo Real Valladolid – Gool FM
(Barcelona) 12 Luulyo 2020. Goolhaayaha reer Germany iyo kooxda Barcelona ee Marc-André ter Stegen ayaa ka sameeyay rikoodh cajiib ah kulankii xalay ay wada ciyaareen kooxaha Barca iyo Real Valladolid.
Ter Stegen ayaa xalay ka ilaashaday shabaqiisa kooxda Real Valladolid, kulankii xalay eek a tirsanaa kulamada 36-aad horyaalka La Liga ee dalka Spain, wuxuuna kooxdiisa ku hoggaamiyay inay guul ku gaarto 0-1.
Wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Marc-André ter Stegen uu shabaqiisa ilaashaday 100 kulan uu kooxda Barcelona kaga soo muuqday dhamaan tartamada kala duwan.
Ter Stegen ayaa ku ciyaaray maaliyada kooxda Barcelona 233 kulan rasmi ah tartamada oo dhan, waxaana kulamadan looga dhaliyay 211 gool, wuxuu guul gaaray166 kulan, wuxuuna caawiyay 2 gool.
Mid ka mid ah 100-kan kulan ee Ter Stegen uu shabaqa ka ilaashaday, ma uusan ciyaarin kulan buuxa, waana kulan ay Barca la ciyaartay kooxda Real Betis, isagoo ku yimid badel, kaddib markii uu garoonka ka baxay Claudio Bravo.
Si kastaba ha noqotee, Marc-André ter Stegen ayaa xalay soo bandhigay kulan weyn, wuxuuna kooxda Real Valladolid ka hor istaagay inay gaaraan shabaqiisa tiro dhoowr jeer inta ay ciyaarta socotay, taasoo ka caawisay saaxiibadiis inay gacanta ku dhigaan saddexda dhibcood.